गफ ! .....: 2006
पैंचो पो हो कि जिन्दगी त तिर्दा तिर्दै बित्यो ।
आफ्नै नजरबाट आफैं गिर्दा गिर्दै बित्यो । १
तेर्सिनु सम्म तेर्सिएछ समस्याको मुढा ,
एउटा जुनी त्यहि मुढा चिर्दा चिर्दै बित्यो । २
माया पनि आज भयो कहिं न'भाको घाणो ,
करै लाग्ने भिर्न , जीवन भिर्दा भिर्दै बित्यो । ३
स्वभिमान नि बेच्नु पर्ने लोकलाज राख्न ,
त्यै ठेसले आफ्नै जीवन पिर्दा पिर्दै बित्यो । ४
कैले देख्नु जिन्दगीमा यौटा मिठो सपना ,
रात आज पनि त कोल्टे फिर्दा फिर्दै बित्यो । ५
केहि गर्न जिन्दगीमा कम्मर निकै कसें ,
आँखिर जीवन मद्दशाला छिर्दा छिर्दै बित्यो । ६
देश माथी उठ्छ भने तिमी पनि काँध राख
आउ हामी देश उचालौं प्रयत्नले लाख लाख ।
मुठ्ठीमा उठाईहेर यो देशको माटोलाई
पिंडा ब्याथा सोधीहेर तिमी हिंड्ने बाटोलाई
यही देशले दिएको छ हामीलाई न्यानो काख
नमाग केहि देशसंग देशलाई केहि देउ बरु
अर्पण गर देशको निंती तिम्रा बौद्धिक शक्तीहरु
देशको निंती स्विकार गर बाधा अनि सारा हाँक
Posted by दीपक जडित at 10:50 PM No comments: Links to this post
छानिएका तीन राष्ट्रिय गानहरू र छानिएका दश रचयिताहरु ।
ब्याकुल माईला (पहिला)
सयौँ थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भई फैलिएका, मेची-महाकाली
हरिरह तिमिल्सिना (दोस्रा)
नेपाली हौ आमा तिमी, हामी छोराछोरी
रङ्गरुप, जात, धर्म, भाषा थरीथरी
कोही बस्छौँ फेदीतिर, कोही टाकुरामा
श्रमशक्ती फुलिदिन्छ हाम्रा पाखुरामा
वुद्ध हाम्रो मुटु बनोस् सगरमाथा शिर
चन्द्रसूर्य ध्वजा बोकी बढ्छौँ लक्षतिर
दु:खसुख साझा हाम्रा बाँच्ने साझा धर्ती
एक अर्को नेपालीमा गाँसी माया प्रीति
हातमाथि हात दिन्छौँ, मुठ्ठीमाथि मुठ्ठी
एकताको सुगन्धमै फुल्छ हाम्रो मट्टी ।
रामप्रसाद ज्ञवाली (तेस्रो)
मेची-काली झंकरत पारी, गुञ्जिरहेको जागृत गान
जनजनको मन मर्दछ नुतन, छर्दछ जीवन भर्दछ सान
स्वतन्त्रताले राष्ट्टरियताले, सम्प्रभुताले गर्वित भाल
जय होस् मेरो जीवनमाली, गौरवशाली देश नेपाल
हिमगिरिदेखि पर्वतवेंसीसम्म तराई पौरख गान
धर्म र जाति संस्कृतिमाथि दृष्टि भएको एक समान
प्रकृतताले उच्च कलाले शोभित सुन्दर शान्त विशाल
जय होस् मेरो जीवनमाली गौरवशाली देश नेपाल ।
उत्कृष्ठ दसमा परेका गीतकारहरू -
१. प्रदीपकुमार राई ‘व्याकुल माइला’
२. हरिहर तिमिल्सिना
३. रामप्रसाद ज्ञावाली
४. गंगाप्रसाद लुइँटेल
५. सूर्यप्रसाद भुसाल
७. कृष्णहरि बराल
८. प्रेमविनोद नन्दन
९. सुधन पौडेल
१०. गणेश ज्ञवाली
नेपाली कविता डट कममा राखिएको तिनवटा छानिएका राष्ट्रिय गानहरू र छानिएका दशजना रचयिताहरु कपि पेष्ट गरेर राख्न मनलाग्यो र राखेको छु । पहिलो उत्कृष्ट गान नै विवादमा परिसकेको भएपनि र पहिलोको बारेमा मैले पहिले नै लेखिसकेको भएपनि फेरी राखेको छु । मलाई दशवटै गीतका शब्दहरु हेर्ने उत्कट ईच्छा छ तर थाहा छैन कसरी पाउन सक्छु ।
Posted by दीपक जडित at 7:58 PM No comments: Links to this post
जून हेरेर आकाशको नफूल तिमी ।
आफुले टेकेको धर्ती नभुल तिमी । १
हुन्छन कती लुक्ने ठाउं लुकेर बस ,
बिना खाम चिठ्ठी भएर नखुल तिमी । २
तिम्रो पनि रहर होला आकाश छुने ,
रहर संगै बहकिंदै नडुल तिमी । ३
प्यास बोकेर अधरमा नहिंड अब ,
सधैं रसाउने मायाको हौ मुल तिमी । ४
फक्री हेर भावना संगै चमेली भ ई ,
प्रकृतीमा सौंदर्य छर्ने हौ फूल तिमी । ५
Posted by दीपक जडित at 12:53 PM No comments: Links to this post
नेपाली पोष्ट डट कममा १९ डिसम्बरको दिन चौतारी स्तम्भ अन्तर्गत रामकुमार एलनले हीरा बेच्न ज्ञानेन्द्र हेटौडा जाने शिर्शकमा यौटा लेख लेख्नु भएको छ ।
यतीखेर मुलुकभर ज्ञानेन्द्रको सम्पतीमाथी सामान्य नागरिक सहर कर लगाउने कुरा अनि कतिपय सम्पतीलाई राष्ट्रियकरणगर्ने कुरा उठीरहेको छ तर कार्यान्वयनमा आउनको लागी ज्ञानेन्द्र संग कूल सम्पती कहाँ कहाँ र कति छ भन्ने कुराकै निधो अहिले सम्म भै सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । आँखामै छारो हाल्नको लागी भने यती रोपनी जमिन भूपतीको नाउंमा भनेर दुई चार पत्रीकामा पढ्न पाईयो अनि भियनातिरबाट पारसको नाउंमा आएको पार्सल भन्सार तिरेर कथित दरबारले लगेको समाचार पनि पढ्न पाईयो । ज्ञानेन्द्रले ब्यापारी ( कैंया ) को रुपमै भोगचलन गरिरहेको सम्पती ( उद्दोग धन्दा ) मात्रै पनि औसत नेपालीले गर्न सक्ने कल्पना भन्दा बाहिर छ त्यसमाथी भूपती भएर ओगटेको सम्पती र उसैले स-परिवार हत्या गराएको उसैको दाजुको सम्पतीको त कुरै नगरौं । त्यो सब सम्पती राष्ट्रियकरण गर्छौं भनेर कुर्लनेहरु आजपनि आपसी कलहमै अल्झिरहेछन । तिनीहरुले आजसम्म यो यो ठाउंको यती यती सम्पती राष्ट्रियकरण भयो भन्न सकेका छैनन । खै कुन शुक्रवार कुरेर बसेका हुन तिनीहरु ? ल्याकत भए तथ्य पत्ता लागीसकेको सम्पतीहरु अहिले सम्म राष्ट्रियकरण भैसकेको घोषणा गर्नु पर्ने हो ।
रामकुमार एलनले उक्त समाचारमुलक लेखमा सत्तापलट हुने बेला तिर वीर शमशेरले कलकत्ता लगेर ४ क्विन्टल ४ किलो सुन बिक्री गरेका थिए र ज्ञानेन्द्रले पनि त्यसरीनै हीरा , मोती लगायतका जवाहरतहरु बिक्री गर्ने सोच बनाएको हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन त्यसैले ज्ञानेन्द्र सँग हाल भएको सम्पुर्ण चल अचल सम्पती मध्येमा कति सम्पतीमा उन्ले आफ्नो हिसाबले चलखेल गर्न पाउने अनि कति सम्पती राष्ट्रको हुनुपर्ने जस्ता कुराहरुको निर्क्यौल नभई ज्ञानेन्द्रलाई हेटौडा गएर कुनै पनि चल अचल सम्पती बिक्री वितरण गर्न नेपाल सरकारले रोक लगाउनु पर्छ र सम्पुर्ण नेपालीहरुले पनि एकजुट भएर यस्को विरोध गर्नुपर्छ ता कि भोली को दिनमा गद्दी खोसिने बेलामा ज्ञानेन्द्रले नेपालको १० बर्षको बजेट बराबरको हीरा मात्रै देश भित्रै बसेर बेच्यो भनेर पढ्नु नपरोस ।
बनाऔं कानुन यस्तो कि कसैले त्यो नाघ्न नपाओस ।
उखेलौं आज जरै फेरी राजतन्त्र जाग्न नपाओस । १
उठोस् नेपाल एकजुट भई छेकोस् गल्ली अनि गौंडा ,
कुम्ल्याएर राष्ट्रको सम्पती त्यो कैंया भाग्न नपाओस । २
कटाउनै पर्दैन सात भञ्झ्याङ्ग बसोस हामी माझमै ,
काटीदिउं बरु हात सबै कि फेरी माग्न नपाओस । ३
हाम्रो छातीलाई युद्ध अभ्यासको तारो मान्नेहरुले ,
उन्मत्त भएर शक्तीले फेरी गोली दाग्न नपाओस । ४
कात्रो फुकाई मुर्दा ब्युँझाउने नरपिशाचको लाममा ,
लोभमा परेर फेरी कुनै मानिस लाग्न नपाओस । ५
Posted by दीपक जडित at 1:28 AM No comments: Links to this post
हेर्छु म पनि भन्थ्यौ हैन ? ल हेर यस्तो भएं ।
तिम्रो आशिर्वादले आज म हेर यस्तो भएं । १
श्रेय यो सफलताको तिमीलाई दिएको छु ,
जल्छौ ईर्श्याले भने तर नहेर , यस्तो भएं । २
भए साहस मुटुमा यो पल सामना गर्ने ,
तिम्रै सामु उभिएको छु त हेर यस्तो भएं । ३
काँढा रोप्यौ कतै बाटोमा कतै तघारो हाल्यौ ,
तिमीले छेकेकै बाटोमा गएर यस्तो भएं । ४
मान्छेहरु भन्ने गर्थे सहि सिद्द हुन्छ भनि ,
बिश्वास भयो अब भने सहेर यस्तो भएं । ५
काँप्दै थिएं किनारामा नदि तर्नु भन्दा अघि ,
धकेलदियौ भँगालोमा बहेर यस्तो भएं । ६
आँधि हुरी वैरिएर झरीपानी परे पनि ,
आशाको 'दीपक' जला'को भएर यस्तो भएं । ७
Posted by दीपक जडित at 10:43 PM No comments: Links to this post
एक झुण्ड युवाहरु
अवागमन अवरुद्द गराएर
सवारी साधन जलाएर
ढुँगा मुढा वर्षाउंदै
अगाडी कस्लाई चोट लाग्दैछ
पर्वाह छैन ।
उता गल्लीको बिचैबिच
निमोठेर मानवताको घाँटी
भुईंमा ढलेको शरिर
कस्को हो ?
टाउको कस्को ?
मान्छे भन्दा माथी
उठ्न नसक्ने प्राणीहरु माझ
आज मान्छे भन्दा तल
कुन प्राणी झरेको छ ?
थरी थरी हामी युवाहरु
फेरी अर्को झुण्ड भएर
हातमा आधुनिक हतियार बोकी
खाँचो छैन हामीलाई
भगवान जहाँ जावोस
हेक्का छैन हामीलाई
भोली आफु दुख्दा
त्यही भगवान सम्झनु पर्छ ।
हामीलाई त भत्काउनु छ
चाहे जे होस अगाडी
हामी किन आफ्नो विवेकले
सकिरहेका छैनौं ?
हामीलाई त लखेट्नु छ
चाहे जो होस अगाडी
हामी किन भगवानको भेषमा
किन निर्माणको बाटोमा हिंड्न
सकिरहेका छैनौ ?
बिनास र बिध्वँसमा तल्लिन
सोचौं त एकपटक
हाम्रो आजको विचारमा
हाम्रै काँधमाथी टेक्दै
शान्तीको ढोँग रच्दैछन
बलिको बोका बनाएर ।
Posted by दीपक जडित at 12:16 AM No comments: Links to this post
Posted by दीपक जडित at 11:25 PM No comments: Links to this post
घाउ सुक्यो , अझै तर खाटा सहेको छु ।
हार भयो पिरतीमा घाटा सहेको छु । १
आफ्नो कुरा राख्ने मौका नै कहाँ पाएं र ?
बोल्नै नदिई बनायौ लाटा , सहेको छु । २
कति सहें मैले हिसाब कहाँ राखें र ?
धेरै चोटी वचनकै भाटा सहेको छु । ३
झिलीमिली,कोलाहल सबै तिम्रै भयो ,
अँध्यारो माथी मैले सन्नाटा सहेको छु । ४
सुख,खुशी,हाँसो सबै लग्यौ तिमिलेनै ,
दुखी जीवनको सबै पाटा सहेको छु । ५
मलजल,गोड्मेल तिम्ले राम्रै पाएछौ ,
मैले सबै आँतरमा राँटा सहेको छु । ६
Posted by दीपक जडित at 3:49 PM No comments: Links to this post
मेरो गीतलाई संधै तिम्रो मुस्कानले साथ दिन्थ्यो
पिरतीले हामी दुईको दुनियालाई मात दिन्थ्यो ।
तिमी हिंड्ने गोरेटोमा पाईतालाको चिनोहरु
खोज्दैछु म अझै पनि त्यही गीतको धूनहरु
नजर लाग्ला हाम्रो माया जोगाएर राख्छु भन्थ्यौ
ईश्वरलाई डाहा भई खोसीदियो हाम्रो माया
तर संधै मेरै साथ रहेकै छ तिम्रो छायाँ
अजम्बरी हाम्रो माया जुनी जुनी बाँच्छ भन्थ्यौ
Posted by दीपक जडित at 12:44 AM No comments: Links to this post
माया सुक्यो लौ न मायाकै रापले झनझन ।
मुटुमा बल्ने त्यो आगोको तापले झनझन । १
तिर्थ कति धायौ , ब्रत बस्यौ कति हँ तिमीले ?
मैलै छ मन त मनैको पापले झनझन । २
चढ्न उकालो खोजेर पनि सकिनं मैले त ,
झरें अझै ओरालो तिम्रै श्रापले झनझन । ३
पाथी , मुरी , मानो आँखिर जे ले नै नापेपनि ,
तलै पर्छु म जाली तिम्रै नापले झनझन । ४
उल्टै बधाई मलाई दियौ , मैले दिनु पर्थ्यो ,
ढल्दैछु भुईंमा तिम्रो त्यै धापले झनझन । ५
बिना कसुर सबको आँखामा नराम्रो भएं ,
दोषी भएं तिम्ले लाएको छापले झनझन । ६
जबर्जस्ती देखावटी ईज्जत त राखिदिएं ,
घृणा बढ्यो मनमा , करकापले झनझन । ७
Posted by दीपक जडित at 1:32 AM No comments: Links to this post
हुन्छ भनेर नै माया हुन्छ
जब हुन्न भनिन्छ
त माया हुदैन
छ भन्दा हुने माया
छैन भन्दा नहुने
कहाँ हुन्छ ?
कस्तो हुन्छ ??
कसरी हुन्छ ???
एकछिन कसैलाई थाहा हुन्न
जब थाहा नहुनुको छटपटी हुन्छ
तब थाहा हुन्छ
र जसरी हुन्छ ।
बिहानको पारीजात फूल
माया हो बोट संगको
जब सम्म थप्पड खाँदैन
पातले चिसो बतासको
तिम्रो नाँगो पाईतालामा
आफ्नो आकृतीको छाप
अनि कसरी मान्नु
माया हुन्छ भनेर ?
तिमी मेरो माया हौ
अझै अग्लो पारेर
जब होस खुल्छ
आफ्नै माया म हैन
तिमी हौ आफ्नो माया
म आफु भुँईमा
पारीजात फूल भएर
तर सक्दिन कसैगरे
तिम्रो नाँगो पाईतालामा छोड्न
माया कसरी हुँ म ?
मायाकै नाम हो माया
माया न तिमी हौ
न म हुँ माया
नशाले धताएको आँखामा
मायाको पर्खाई हो माया
माया नआउञ्जेलको माया
माया आईसके पछि
माया नहुन सक्ने
अझ माया नआईपुग्दै
हुनु र नहुनुको प्रतिती जस्तो
माया नआई नै आएझैं
माया आएपनि नआएझैं
बिट मर्दै नमर्ने
मायाकै बुनाई हो माया
र बुन्न नथाल्दै
तिम्रो र मेरो आँखा जहाँ चार भयो ।
त्यहींनेर मेरो दिलको हार भयो । १
गुलाबझैं सुन्दर कोमल माया तिम्रो ,
जिन्दगी जिउने मेरो आधार भयो । २
आकाशझैं स्वच्छ सफा दिलमा मेरो ,
तिम्रो प्रेमको रङ्गको बहार भयो । ३
चन्द्रीकाझैं चम्कने आँखाको नानी त्यो ,
म आफै नै हराउने संसार भयो । ४
हिमालझैं ललाट चुमें जब तिम्रो ,
'दीपक'को त सपना साकार भयो । ५
पहिलेनै लेखेको यो गजल नेपालीपोष्ट डट कममा प्रकाशित भै सकेको हो । यस्लाई मैले अहिले थोरै सम्पादन गरेको छु । मैले आफैले लेखेको रचनाहरु यदि त्यो यस ब्लगमा राखेको समयमा लेखेको हुँ भने आफ्नो रचना : नयाँ कलम र यदि त्यो पहिले नै लेखेको हो भने आफ्नो रचना : पुरानो कलम भनेर बर्गिकरण गर्ने गरेको छु र अरु प्रकारका लेखाईहरुलाई पनि बर्गिकृत गर्ने बिचार गरेको छु ।
Posted by दीपक जडित at 7:18 PM No comments: Links to this post
सानै छंदा मैले देखेको छु
आकाशबाट तारा खसेको
आमाको न्यानो काखमा बसेर
आकाशमा हिंडीरहेका ताराहरुलाई
साना औंलाहरुले देखाएर
आमालाई धेरै पटक सोधेको छु
आकाशमा तारा किन हिंड्छ भनेर
आकाशका देवता हुन ताराहरु
धर्तीका प्राणीको पापधर्म
लेखा लगाउन हिंड्ने गर्छन
कुनै कुनै ताराहरु
आमाको सरल सत्य जवाफले
चित्त बुझ्दै गरेको बेला
अकस्मात खस्यो अर्को तारा
आमाले फेरी बुझाउनु भयो
धर्म सकिएर ताराहरु
यसरी पृथ्वीमा खस्ने गर्छन
आज फेरी त्यसरीनै
आकाशबाट तारा झर्दा
भन्न मन लाग्छ आमालाई
ताराहरु देवता हैनन
जो धर्म सकिएर पृथ्वीमा झरुन
त्यो त केवल उल्का हो
तारा झर्नुको भ्रान्ती मात्र
आकाशले कहिल्यै पनि
आफ्ना ताराहरु खर्च गर्दैन
बरु पृथ्वीबाटै धर्म छाडेर
जसरी हाम्रो माटोबाट
धर्म नसकिई खसाईएको छ
भर्खरै एकहुल ताराहरु ।
२८ जेष्ठ २०५८ झापा , गौरादह ।
विरेन्द्रको स-परिवार हत्या भएको समयमा मैले यो कविता लेखेको रहेछु । आज समयले कोल्टो फेरेर राजतन्त्रकै अवशान हुन लागेको बेलामा कतीहरु आफुलाई गणतन्त्रवादी देखाउने कसरतमा जुटेका छन र बिगतमा राजपरिवारको सम्बन्धमा आफुले गरेको कुनैपनि कामहरु भरसक लुकाउने चेष्टामा होलान । त्यस्ता प्रवृतीका मानिसहरु सायद भोलीको समयमा पनि आफ्नो दुनो सोझो नै बनाउन चाहन्छन । अर्कोतिर एक प्रकारले सबैतिर गणतन्त्रवादी देखिने फेसन नै छाएको छ तर मेरो भने कुरा अर्कै छ । म राजतन्त्रको बिरोधी हुँ तथापी मैले विरेन्द्रको बंशबिनास भएको समयमा लेखेको कविताहरु तपाईंहरु सामु राखेको छु र अरु पनि भएका राख्दै जानेछु अब मलाई पनि राजावादी रहेछ या मण्डले हो भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केहि छैन तर चाकरीको भाषा मैले प्रयोग गरेको छैन ।
पत् पत् धुवाँएर
चट् चट् आवाज गर्दै
एक्कासी सुकेका पतिङ्गरमा
वरिपरीका सबै त्यतै दगुरे
कोहि यता कोहि उता छरिएर
कसैले सेउला हरियो
कसैले माटो हालेर
आगो निभाएर गए ।
भित्र भित्रै ह्वारह्वारी सल्किएर
चुपचाप उभिएको मलाई
सबैले देखेर पनि नदेखे झैं
बाटो काटेर गए
सोचें केवल सोचें
पतिङ्गरमा सल्किएको आगोले
त्यसैले तत्काल त्यसको
निदानको उपाय रचियो
यौटा मान्छे भित्र
अर्को मान्छेलाई छुन सक्दैन
छाती भित्र दन्किएको
करोडौं मान्छेको भिंडमा
आफैं मात्र जलेर
ठिँग उभिएको छु
एक्लै अनि एक्लै ।
१३ माघ २०५७ रानी , बिराटनगर ।
छोडेपछि तिमीले म रल्लिएर हिडें ।
दुनियादारी भुलेर हल्लिएर हिडें । १
शान्तै थिएं नि म पनि हिजो अस्ती सम्म ,
अचानक लौ आजै खल्बल्लिएर हिडें । २
तिमीले नै नबुझे'सी मन् भित्रको ब्याथा ,
त्यै ब्याथाले भित्रभित्रै थल्लिएर हिडें । ३
पहिलो चोटी पिएको धेरै नै पिएछु ,
मात्तिएर गल्ली गल्ली झल्लिएर हिडें । ४
त्यस्तै बेला तिमी सँग जम्काभेट भयो
लौ न , म त शरमले डल्लिएर हिडें । ५
रक्सी भन्दा कडा र'छ अझै तिम्रो नशा ,
त्यै भएर सकेसम्म छल्लिएर हिडें । ६
१. यस्तै हुँदो रै'छ हजुर ।
लाज शरम पचेपछि यस्तै हुँदो रै'छ हजुर ।
गोहीको आँशु झार्दै मान्छे त्यसै रुँदो रै'छ हजुर । १
मपाईँ बन्न मान्छेलाई सिकाउनु नै पर्ने हैन ,
फलै बिना पनि रुखको हाँगा नुँ'दो रै'छ हजुर । २
आफन्तको साईनो गाँसी कसैलाई विश्वास गर्दा ,
मक्किएर त्यहि साईनो पनि चुँ'दो रै'छ हजुर । ३
रीत नै यस्तो बस्या हो कि मलाई मात्रै खट्कीएको ,
मौका पाउंदा मान्छेले नै मान्छे दुँ'दो रै'छ हजुर । ४
समय नै उल्टो भए दीपकको भन्नु केही छैन ,
तर तल गिर्नेले नै शिखर छुँदो रै'छ हजुर । ५
(तन्नेरी डट कममा प्रकाशित ।)
२ बोल्नु पर्ने रै'छ बोल्दा ।
बोल्नु पर्ने रै'छ बोल्दा छाती ठोक्दै कराएर ।
नत्र नबोल्नु नै रै'छ सबै सँग डराएर । १
भन्नु पर्ने थियो मैले साँचो कुरा सबै सामु ,
मुखै फोरीएन आफ्नो त्यसै त्यसै सर्माएर । २
यात्रा थाल्दा हतारोमा होसै कता थियो कुन्नि ,
अलपत्रै परें ऐले ठाम् ठेगानै हराएर । ३
अरु अरुकै घाउमा मलम् पट्टी गर्दैगर्दा ,
खप्नै गार्हो भो मलाई आफ्नै घाउ चर्याएर । ४
बाटै भरी हल्ला थियो कोही लुटीएछ भन्ने ,
आफैं लुटीएको रै'छु थाहा पाएं घर् आएर । ५
मनै थे'न तिमीलाई टाढा भ'को हेर्ने तर ,
आफैं पर भयौ उल्टै लेखापढी गराएर । ६
जन आन्दोलन - २ भै रहेको थियो नेपालमा । लाखौं करोढौं नरनारीहरु एकजुट भएर शाही शासन बिरुद्ध छाती खोलेर सडकमा ओर्लिएका थिए । समस्त विश्वलाई नै चकित तुल्याउंदै मानब सागर सडकमा उत्रीरहेको बेला म चाहिं यता अमेरिकामा बसेर आन्दोलनरत नागरिकको समर्थनमा अनि फासिस्ट शाही सत्ताको बिरोधमा आफ्नो बर्कतले भ्याए सम्म कविता , गीत , गजल ईत्यादी लेख्दैथिएं । आन्दोलनको त्यती छोटो अवधिमा विश्वमै सबै भन्दा धेरै जनताहरु सडकमा उत्रीएको भन्ने जस्ता समाचारहरुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सनसनी मचिईरहेको थियो । यहाँका मेरा केहि अमेरिकन साथीहरु जो पर्यटकिय आनन्द लिन पटक पटक नेपाल पुगेका थिए अब भने नेपालीले नेपालमा सहि परिवर्तन ल्याउछन भन्ने जस्ता टिप्पणी गर्दथे भने केहि भने विश्वको नक्सामा नेपाल कहाँ छ ? कस्तो छ ? भनेर हेर्ने गर्थे । त्यसबेला मैले यौटा यस्तो गजल लेखेको थिएं -
विश्व सारा मानचित्रमा नेपाल हेर्दैछन ।
भन्छन अब नेपालीले नेपाल फेर्दैछन ।
त्यसबेला मैले लेखेका केहि कविता र गजलहरु नेपाली कविता डट कमले र केहि नेपाली पोष्टले प्रकाशित गरिदिएको थियो । " ए ! राजन , तिमी त मरीसक्यौ ।" भन्ने शिर्शकमा मैले लेखेको यौटा कविता भने कतै पनि प्रकाशित नहुंदा सार्है खिन्न भएको थिएं । बलिदान मार्ग भन्ने शिर्षक पनि दिएको सोही कविताको अन्त्य भाग यस्तो थियो ।
हे ! राजन ,
कि त फुकाल श्रीपेच
र राखिदेउ सङ्राहलयमा
कि त निस्क बाहिर
म तिम्रै घर अगाडीको मुल बाटोमा
छाती खोलेर तिमीलाई मुर्दाबाद भन्दैछु
मेरो आवाज दबाउन सक्छौ भने
ठोक गोली मेरो छातीमा
म राजा मुर्दाबाद भन्दै
तिम्रै घर अगाडीको मुलबाटोमा
आफुलाई बलिदान दिएर
तथाकथित दरबारमार्ग भनिने
तिम्रो घर अगाडीको मूल बाटोलाई
बलिदान मार्ग बनाउन तैयार छु ।
यो कवितालाई मैले यहि ब्लगमा July 04 , 2006 का दिन राखेको छु । यसरी लेख्दै जाँदा मैले खडेरीको खेती भन्ने गणतान्त्रीक गीत , गजल र कविताहरुको संग्रह बनाएको छु जसमध्येको यौटा गीत बाल गायिका दीन्जुश्रीको स्वरमा स्वराङ्कन भै सकेको छ । त्यस्तै कुनै कुनै गजल , कविताहरु मैले उमेश जीको माईसन्सार डटकममा प्रतिकृयाको स्थानमा लेखेको पनि छु ।
नेपालमा जनाअन्दोलन - २ ले शाही सत्तालाई झुकाई छाड्यो र त्यसैले बर्खास्त गरेको प्रतिनिधी सभा पुनर्स्थापना भयो । प्रतिनिधी सभाले धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्दै गयो र विविध अप्ठ्यारोहरुको बावजुध अझै परिवर्तन गर्दैरहेको छ । त्यस्तै मध्ये परिवर्तन गर्न अपरिहार्य रहेको नेपालको राष्ट्रियगान भनिने राजाको स्तुती गीत पनि थियो जस्लाई खारेज गरियो र नयाँ राष्ट्रियगान को खोजीकार्यको थालनी भयो । समाचारमा मैले यो कुरा थाहा पाउंदै गर्दा मलाई मेरो दाजु डेगेन्द्रले ईमेल लेखेर तँ पनि लेख न यौटा राष्ट्रियगान भनेर सल्लाह दिनुभयो । दाजुकै प्रेरणाले म पनि लेख्न कस्सिएं । लगभग ४ घण्टाको परिश्रम पछि मैले यौटा राष्ट्रिय गीत तयार पारें । लेखुञ्जेल सम्म त मलाई मेरो गीत राष्ट्रियगान को लागी पठाउंछु भन्ने थियो तर लेखीसकेपछि भने पठाउन मन लागेन । नयाँ नेपाल निर्माण गर्नको लागी नेपालमा लाखौं करोढौं जनताहरु आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी सडकमा उत्रीरहेका छन । सयौंहरु छातीमा तातो गोली थापेर सडकमै ढल्दैछन यता म भने डिभी भिषा पाएर मख्ख परेर ३ बर्ष अगाडी देखि अ मेरिकामा आनन्दले बसेको छु । अमेरिकामा बसे पनि म पनि यौटा नेपाली नै हुँ र ति नै नेपाल आमाको छोरो हुँ त्यसैले मलाई नेपाली नागरिक भएको हैसियतले राष्ट्रियगीत लेख्ने अधिकार त छ तर बिदेश पलायन भएको हुंदा राष्ट्रियगान को निम्ती पठाउने अधिकार छैन जस्तो लाग्यो । मलाई मेरो नैतिकताले नै सायद आफ्नो रचना राष्ट्रियगान को निम्ती पठाउन दिएन र नपठाउने निर्णय गरें । उता दाजुलाई पनि ईमेलमै मैले राष्ट्रियगीत त लेखें तर पठाउन मन लागेन । एक त मेरो गीत १०० औं नम्बरमा पनि नपर्न सक्छ अर्को म आफु बिदेशमा बसेर कुन मुखले राष्ट्रियगान लेखुं भनेर जवाफ लेखें पछि फोनमा कुरा हुँदा " पठाउनु नपठाउनु तेरो बिचार हो तर १००औं नम्बरमा पर्यो भने पनि पछि पुस्तकाकार भएर निस्कंदा तेरो पनि निस्कन्थ्यो भनेर मात्र लेख भनेको हुं । त्यसो त भोली राजावादीहरुकै रचना राष्ट्रियगान हुन पनि के बेर? यो नेपालमा जे पनि हुन्छ । " भन्नुभएको थियो । नभन्दै प्रस्तावित राष्ट्रियगानका रचयिता ब्याकुल माहिला अहिले विवादमा परेका छन । उनको रचना सरल , सहज अनि सबै पक्षलाई समेटिएको भएता पनि मलाई पहिलो हरफमै चित्त बुझेको थिएन । सयौं थुङ्गा फूलाका हामी यौटै माला नेपाली..... यहाँ निश्चित रुपमा ब्याकुलजीले सयौं थुङ्गा फूललाई नेपाल भित्रका विविध जात जाती भाषा भाषी को प्रतिक बनाउनु भएको हो तर सयौं थुङ्गा फूल भन्दा यौटै जात/प्रकारको सयौं थुङ्गा बुझिन आउछ ( मैले मात्र त्यसरी बुझेको पनि हुन सक्छु )। त्यसैले विविध जात जाती भाषा भाषीकै प्रतिक लेख्दा सयौं फूलका थुङ्गा हामी... लेख्नु पर्थ्यो अथवा सयौं थरी फूलका.... भनेर लेख्नु पर्थ्यो कि ? मलाई लगेको कुरा हो यो जुन कुरामा म नै गलत पनि हुन सक्छु । अन्यत्र भने ब्याकुल जीको रचनामा मैले कतै खोट भेटिनं बरु ब्याकुलको रचना र मैले लेखेको राष्ट्रिय गीत कता कता मिल्दो जुल्दो रहेछ । यसो भनेर मैले आफ्नो रचना पनि राष्ट्रियगानको निम्ती योग्य छ भन्न खोजेको हैन । मैले त आफैले आफुलाई राष्ट्रियगान लेख्ने अधिकार बाट बञ्चित गराएको छु । जती बेला मलाई म आफु राष्ट्रियगानको लागी आफ्नो रचना पठाउन अयोग्य छु भन्ने बोध भयो अर्थात मलाई नैतिकताले राष्ट्रियगान को निम्ती आफ्नो रचना पठाउन रोक्यो त्यतीबेला मलाई आफु भित्र सार्है नमिठो पिंडा भएको थियो र त्यो पिंडा पोख्न मैले यौटा गीत लेखेको थिएं जुन यस्तो छ -
मेरो देशले रगत मागेको थियो तर म बलि भईनं
मेरी आमा रोईरहेकी थिईन म आँशु पुछ्न गईनं।
तातो रगत मेरो नशाहरुमा पनि त उम्लिरहेको थियो
क्रान्तीको आगो बाल्न सकिनं जलाउदैछु शान्तीको आशामा दियो
मलाई छोरा नभन ए ! आमा , म तिम्रो सपूत हुन सकिनं
शहिद भएर मैले आफ्नो रगतले तिम्रो पाउ धुन सकिनं ।
मेरो धर्तीले मलाई सरापेछ क्यार मैले फर्किने बाटो पाईनं
मुठ्ठीमा उठाई टिका लगाउन मैले आफ्नै माटो पाईनं
मैले आफ्नो पसिना बगाई आफ्नै माटो भिजाउन सकिनं
माफीदेउ मलाई ए ! आमा , मैले तिमीलाई रिझाउन सकिनं ।
सायद यही गीत लेखेर मैले राष्ट्रियगान को लागी आफ्नो रचना नपठाउनुको पिंडा भुलें । राम्रो छ भनेर हैन मैले पनि राष्ट्रियगान को लागी भनेर यस्तो रचना लेखेको थिएं भनेर आज उपयुक्त संदर्भ निस्किएकोले गर्दा यहाँ राख्दैछु ।
नेपाली हौं सयौं थरी फूलका माला एक
बिभुषित छौ भाषा , जाती , धर्मले अनेक ।
विविध संस्कृतीको एकै संगम थलो विशाल
पृथ्वीकै स्वर्ग - शान्त , अनुपम नेपाल ।
मेची काली , हिमाल तराई संगै उठीरहोस
उन्नतीपथमा नेपाली हात संधै जुटीरहोस ।
उभिएको पहाड भै एकतामा अटल
शहिदको रगतले धोईएको नेपाल ।
विश्व सामु उच्च सदा शिर सगरमाथा
गाईरहुँ जय ! जय ! जय ! नेपाल गाथा ।
अब त ईन्टरनेटमा बस्यो कि सबैभन्दा पहिले उमेशजी को माई संसार खोल्न पुगिहालिन्छ । नखोलियोस पनि किन तरोताजा समाचार हेर्न पाईने भएपछि । त्यस्तै ताजा मध्येमा आज नेपालको राष्ट्रिय गीत राखिएको रहेछ । यस राष्ट्रिय गीतका रचयिता ब्याकुल माईला रहेछन । राष्ट्रिय गीत भएपछि त्यो सबैको साझा सम्पतीमा गनिने हुँदा मैले पनि अधिकार जमाएर उक्त गीत यहाँ राखेको छु । भाग्यमानी रहेछन माईला जस्को कलमले आज देशको राष्ट्रिय गीत रचना गर्ने सौभाग्य पाएको छ ।
सयौं थुङ्गा फूलका हामी यौटै माला नेपाली ,
सार्भभौम भई फैलीएका मेची महाकाली
प्रकृतिका कोटीकोटी सम्पदाको आँचल ,
ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल ,
वहूल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल ,
Posted by दीपक जडित at 3:35 PM No comments: Links to this post
मैले गत नोभेम्बर २५ मा भन्दैछ रे नेपाल शिर्षकमा यौटा गजल लेखेको थिएं जुन आफ्नो ब्लगमा राख्नुको साथै चहल सयपत्रीजीको सयपत्री ब्लगमा पनि पठाएको थिएं । आज त्यहाँ मेरो उक्त गजलले स्थान पाएछ कि पाएनछ भनेर हेरेको थिएं । मेरो गजलले स्थान पाएनछ - सायद योग्य ठहरीएन क्यार तर त्याहाँ विजयसिंह थापा ज्यु ले लेख्नु भएको सहु सहु कविता देखेर भने मलाई नमज्जा लाग्यो । समको आवाज सहु सहु सहु बाबु सहनै नसके पनि लाई अहिले त्यसरी अर्थलगाएर कविता लेख्नु कती उचित हो कती अनुचित थापाजी लाई नै थाहा होला तर मलाई भने त्यसरी अर्थ लगाएर अहिलेको घडीमा त्यो कविता लेखेको अलि चित्त बुझेन त्यसैले के गर्छौ बाबु ......सहनै नसके पछि ? भन्ने शिर्शकमा तुरुन्त जवाफ कविता लेखेर चहल जी लाई ईमेल गरिदिएको छु र अनुरोध गरेको छु राखिदिनुहुन । सायद राखिदिनुहुन्छ होला । तपाईंको लागी भने अहिल्यै हेर्नको लागी उक्त दुबै कविता यहाँ राख्दैछु ।
पहिले विजयसिँह थापा जी को कविता हेर्नुहोस ----
सहु सहु ....
घर नजिकको गिजेरी रूखमा
चिन्ता लिएर नबाँच
राष्ट्र लुछ्न नै जन्मिएका हुन्
त्यसै किन रिसाउँछौ ?
हामीलाई सताउन नै जन्मिएका हुन्
व्यर्थ किन विरोध गर्र्छौ ?
सहु बाबु सहनै नसके पनि ।
जवाफमा मैले लेखेको कविता यस्तो छ ---
के गर्छौ बाबु ?...... सहनै नसके पछि ।
म पनि सहन सक्छु
थाहा छ तिमीपनि सहन सक्छौ
तर सहनुको पनि हद हुन्छ
कती सहने अझै
दुईसय सैंतिस बर्ष बित्यो ।
सहेरै प्रत्येक बर्ष
म हरु गिजेरी रुखमा
अब झुण्डिनु नपरोस
म हरु गिजेरी रुखमा फेरी
अब हामफाल्नु नपरोस
तिमीहरु भिरबाट फेरी
त्यसैले सोच एकपटक
Posted by दीपक जडित at 11:45 PM No comments: Links to this post
ढाँटेकै हुन पहिले पनि फेरी पनि ढाँट्न सक्छन ।
आज मिले झैं गर्नेहरु भोली फेरी फाट्न सक्छन । १
आफ्नो टाउको जोगाउन परेवा उडाई हिंड्नेले ,
के भर छ र ? भोली फेरी हाम्रो घाँटी काट्न सक्छन । २
आफ्नो शालिग घोडामाथी चढाई यिनीहरुले नि ,
शहिद गेट्मा शहिदको फेरी हात छाँट्न सक्छन । ३
आज जस्लाई नङ्ग्याएर तह लाउने किर्या खा'छन् ,
भोली फेरी यिन्ले उस्कै तलुवा धरी चाट्न सक्छन । ४
झुप्रै पिच्छे पुगी यिन्ले यो त्यो गर्ने वचन त दिए ,
दर्बार भित्र कुर्शी देखी त्यो वचन् नि साट्न सक्छन । ५
दाशताको साङ्लो खोल्ने नाटक रचेर यिन्ले भोली ,
फेरी हाम्लाई झुण्ड्याउने लठारो नि बाट्न सक्छन । ६
यो गजल मैले नेपाली पोष्ट डटकमलाई र नेपाली कविता डट कमलाई पठाएको थिएं सायद त्यहाँ योग्य ठहरिएन क्यार - अथवा कुनै ठाँउमा प्रकाशित भै सकेको गजललाई आफ्नो पत्रीकामा नराख्ने मानसिकताले राखिएन होला , तर हाम्रोदेश ब्लग चलाउनुहुने मित्र संकल्प जी ले बडो स्नेह पुर्बक हाम्रो ब्लगमा राखिदिनु भएको छ । संकल्प जी प्रति आभारी छु ।
Posted by दीपक जडित at 7:30 PM No comments: Links to this post
मनमा राखे मनका कुरा मनै हजुर कुपित हुन्छ
ओठमा ल्याई बोलीदिए त्यही मिठो प्रीत बन्छ ।
मनमा सबको घाउ हुन्छ
सबैलाई दुख्छ पोल्छ
त्यही हाँस्न सक्छ जस्ले
मनका सबै कुरा खोल्छ
मिठो बचन बोल्ने को त बोली हजुर गीत हुन्छ
मनमा राखे मनका कुरा मनै हजुर कुपित हुन्छ ।
आँखा सबको रसाउंछ
आँशु पनि झर्न सक्छ
आँशु झेल्न सक्छ जस्ले
मनको दुख तर्न सक्छ
मनको मैलो धुन सके आँशु हजुर मित हुन्छ
Posted by दीपक जडित at 12:14 AM No comments: Links to this post
बल्ल ब्युँझिएं मुर्छाबाट भन्दैछ रे नेपाल ।
अब आफ्नै हातले स्वर्ग बन्दैछ रे नेपाल । १
विकट गाउँ , वस्ती , सहर , बजार चारैतिर ,
सबै हिंड्ने उस्तै बाटो खन्दैछ रे नेपाल । २
बर्षौं सम्म उठ्नै नदिई कुल्चिनेहरुलाई ,
छानी छानी सबको टाउको गन्दैछ रे नेपाल । ३
हिंजो सम्म लुकी भागी हिंड्नेहरुलाई पनि ,
हाँस्दै खेल्दै हिंड्न सक्ने आनन्दै छ रे नेपाल । ४
पटक पटक ब्युँझिंदा नि उठ्न नसकेको ,
अब उठ्ने अठोटमा बुलन्दै छ रे नेपाल । ५
Labels: आफ्नो कलम : नयाँ रचना ।
ब्यस्तताको कारण तिनचार दिनसम्म ईन्टरनेटमा बस्न नपाएको मलाई आफु निक्कै पछि परेछु जस्तो लागीरहेछ । नेपालमा शान्ती सम्झौता भै सकेर पनि दीपावली मनाउने , शान्तीको ड्रम बजाउने ईत्यादी काम भै सकिसकेछ , राजाले समेत शान्ती सम्झौता भएकोमा आफु प्रसन्न भएको बक्तब्य निकालीसकेछन । कस्तो अचम्म !!! ति नै राजालाई हटाउनको लागी शान्ती सम्झौता गरेर सम्बिधान सभाको चुनाब गर्ने भन्दैछन राजाचाहिँ त्यसैमा प्रसन्न भए रे । कतै गड्बडी त हुन लागेको छैन ? शान्ती सम्झौताको ३.३ (बुँदा नै त होला नि) मा भनिए अनुशार राजसँस्था कायम राख्ने या नराख्ने भन्नेबारेमा संबिधान सभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने रे । भनेपछि सम्बिधान सभाको पहिलो बैठकमा राजा राख्ने भन्नेहरु २ जना बढि निस्किए भनेपनि राजालाई राख्ने हो त ?? अनि राजा हटाउनु पर्छ भन्नेहरु २ जना बढि हुंदै राजा हटाईदिने त ? खै यो राजा राख्ने र हटाउने पनि केटाकेटीको खेल हो कि क्या हो ? यदि जन आन्दोलन - २ को मर्मलाई आत्मसात गरेर नेपाली जनताको चाहना र ईच्छा बमोजिम देशलाई अगाडी लैजाने हो भने - यति भै सके पछि त संबिधान सभाको पहिलो बैठकले बिना शर्त राजसँस्थाको खारेजी गर्नु पर्ने हैन र ? जन आन्दोलन - २ का सहिदहरुको सम्मान पनि त त्यसैमा हुन्थ्यो होला नि तर खै त यहाँ अझै पनि जनताको इच्छा र चाहना बमोजिम काम गर्ने नेताहरु छन होला र ? म त शँकामा पो छु । यदि त्यसरी बिना शर्त राजतन्त्रको खारेजी गर्न मिल्दैन भने , ( हुनत नेपालमा नमिल्ने कुरा नै के छ र ? राजा र काँग्रेस मिल्न सक्छन , काँग्रेस र एमाले मिल्न सक्छन , राजा र एमाले मिल्न सक्छन , हुंदा हुंदा भोलि राजा र माओवादी पनि मिल्न सक्लान - झण्डै मिलेका पनि थिए तर दुखको कुरा राजा हटाउने सवालमा एक स्वरमा एक भएर हाम्रा नेताहरु मिल्न सक्दैनन । ) राजतन्त्रलाई बोक्नै पर्छ भने किन लोकतन्त्रको डिँग हाँकी हिंड्ने हो हाम्रा नेताहरुले ? आफ्नो आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न बाहेक देश र जनताको निँती काम गर्ने नेता हामीले कहिले पाउने होला ?
बर्तमानमा देशको मुल समस्या राजतन्त्र हो र मुल आवश्यकता शान्ती हो भनेर सबै नेताहरुलाई ज्ञात नै छ तर पनि खै त मुल समस्याको मुल जरो उखेल्न किन यस्तरी हिच्किचाएका हुन ? राजालाई स्पेस दिनु पर्छ भन्ने प्रधानमंत्रीको पछाडी र राजा राख्ने नेपाली काँग्रेसका सभापतीका पछाडी (दुबै यौटै भए पनि ) थोरै सहयोगी नहोलान भन्न सकिन्न जस्ले बिभिन्न प्रभोलनमा परेर राजा राख्नु पर्छ भन्न सक्छन । राजतन्त्र राख्ने र हटाउने भन्ने प्रश्नमा आमजनताले आफ्नो धारणा राख्न पाउने कि नपाउने ? पाउने हो भने कसरी पाउने ? नपाउने हो भने किन नपाउने ? कि सम्बिधानसभामा बस्ने सदस्यहरुले मात्रै त्यस्को छिनोफानो गर्ने ? सम्बिधान सभामा सहभागी हुनेहरुले भोली राजतन्त्रको बिषयमा गरेको फैसला मान्यनहुनेले मुद्दा हाल्न पाउने कि नपाउने ( मेरो भन्नुको आसय फेरी त्यसै बिषयमा अर्को पटक बहस गरेर अर्को फैसला निकाल्न पाउने कि नपाउने ? ) कि फेरी चित्त नबुझ्नेले भोली बन्दुक बोकेर जँगल तिर जाने ? आउदै गरेको शान्ती साँच्चिकै हो कि भ्रम मात्रै हो ? प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित छन ।
Posted by दीपक जडित at 2:35 PM No comments: Links to this post
तिम्रो माया बल्छि रैछ मुस्कानको चारो थाप्यौ
जालहारीको जाल जस्तो तिम्रो त्यो जाली मायामा
दुनियां भरको सुखहरु तिमी भनी लत्याई दिएं
आफ्नै मनको केही खुशीहरु पनि हुत्याईदिएं
सबै छोडें तिम्रो निम्ती आंखिरी म रित्तो भएं
भित्र भित्रै धमीराले मक्काएको भित्तो भएं ।
दुखिरन्छ मुटु , आँशु आँखाबाट बर्षिरन्छ
बुझाउं कसरी यो मन झस्किरन्छ तर्सिरन्छ
बिहान पनि मेरो निंती सुर्य अस्ताएझैं भयो
मैले खाँदा कसम पनि हरिताल खाएझैं भयो ।
आशाको यौटा दिप जलायौ
ईश्वर भाकी दिलमा आई
लहर दिलको सागरमा उठायौ
भरेर पिरतीको गीत गाई
मन्मा तिमिले घर बसायौ
जुनी जुनी सम्मलाई ।
यहि नै थियो मेरो प्रेमको पहिलो सम्बोधन । प्रत्येक हरफको पहिलो अक्षर लिएर ठाडो लहर मार्फत आफ्नो अभिब्यक्ती पोख्ने प्रयास । किशोरावस्थाको यौटा लहड जुन पछि गएर वाष्तविक प्रेममा परिणत भयो र अझै पछि गएर यौटा मिठो पिंडा बन्यो । यसरी -
मायाको सिङ्गै आकाश दिएथें
मायालुलाई त्यहि थोरै भयो
नसकेर दिन जून ताराहरु
यो अभागीको जीवन उजाड भयो ।
आज नोभेम्बर १६ तारिख सन २००६ तदअनुशार २०६३ साल मंशीर ०१ गते (नेपालमा) , बिर्षन्छु भन्दा पनि नसकेको आफ्नो ब्याथा फेरी एकपटक सम्झंदैछु । कैयौं पटक मैले प्रण गरें भयो अब म यो विषयलाई सम्झन्न भनेर तर यो विषय नै यौटा घाउ रहेछ । घाउ जती पुरानो भयो त्यतीनै डरलाग्दो हुंदो रहेछ जबसम्म त्यो घाउ रहन्छ ; निको भैसक्ने हो यदि भने त घाउ नै भनिंदैन । मंशीर १ गतेलाई मैले मेरो जीवनको कालो दिन घोषणा गरेको छु किनकी यो मेरो प्रेमको अवशान भएको दिन हो । मेरो मन खाली भएको दिन हो । मेरो मनको सँघारबाट मायालुको पाईला हटेको दिन हो । घोषणा गर्दै गर्दा सायद म यो दिनलाई कहिल्यै नसम्झने प्रण गर्दै थिएं होला तर आज आएर लाग्दैछ त्यही कालो दिनको पनि मेरो जीवनमा महत्व रहिरहने रहेछ । त्यसैले त आज फेरी म सम्झीरहेछु त्यो दिनलाई अनि मेरी मायालुलाई । हुनत अब केवल सम्झनु मात्रै नै हो तर मैले गरीरहेको यो सम्झना उस्लाई श्रदाञ्जली बनोस । जती हार्नु मैले हारी सकेको छु कुनै खुशी सायद अब फेरी जित्न सक्दिन म जिन्दगीमा त्यसैले त भनेकै छु -
मनको सँघार नाघेर गयौ मन रित्तै पारेर ..... अनि बसेको छु रित्तो मनको घर कुरेर । यो बाँच्ने जीजिविषा हो जिन्दगीको त्यसैले हार स्विकारेरै बाँचेको छु म । यो ब्यंग जो जिन्दगीको त्यसैले आफुलाई भन्दा धेरै माया गर्छु भनेर पनि उ बिना नै हाँसेको छु म । त्यसो त परिवार संग समाज संग आबद्द यौटा मान्छे झ्याङ्ग भित्रको वाँस हो जस्को फेद छिनेर पनि झ्याङ्ग बाट आफै अलग हुन सक्दैन अलग गर्नको लागी झ्याङ्ग भित्रका अरु वाँसहरुको पनि हाँगा बिंगा काट्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले त होला भए जती आफ्नाहरु लाई दुखाउन नसकेर फेदै छिनेर , सिङ्गै सुकेर पनि मान्छेले समाजको झ्याङ्ग भित्रै रहनु पर्छ । म सानै छंदादेखि गाउंघरमा मान्छेहेरुले कुनै काम सोचेको भन्दा बिपरित भै दिंदा या कुनै काममा असफलता हात लाग्दा मरेकै दिन भयो भन्ने गरेको सुन्थें यहाँ सम्म कि बिस्कुन सुकाउनु पर्दा घाम लागिदिएन भने अथवा कतै हिंड्ने दिनमा झरी परिदियो भने पनि मरेकै दिन भयो भनेको सुन्थें । त्यसबेला त्यहि भनिएको दिन नै मरेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो । पछि बुझ्दै जान थालें घाम लाग्ने , हावाहुरी चल्ने , झरी पर्ने ईत्यादी त दिनको कर्म नै हो रहेछ त्यसैले दिनलाई मरेको त भन्न सकिन्न । आफु (भन्ने ब्याक्ती) मरेको दिन त झन हुनै सक्दैन । मरेको दिन कस्लाई थाहा हुन्छ र ? मरेपछी त सकिईगयो । त्यसैले मरेको दिन भयो भन्नु त आफ्नो कोही पृयजन मरेको दिन पो हो रहेछ । सुन्दै खेरि बुझे जस्तो लाग्ने यस्ता साना कुराहरु फेरी जीवनमा स्पस्ट रुपमा बुझ्ने दिन पनि आउदो रहेछ । भोगाईमा मरेको दिनको अर्थ मैले पनि त्यसदिन मात्र बुझें जुनदिन मैले आफ्नो सबभन्दा नजिकको मान्छे गुमाएं र त्यसको तिक्तता महसुस गरें । जती बिर्षन्छु भन्थें उती धेरै सम्झंदो रहेछु म उस्लाई । मैले उस्को स्मृतीमा धेरै कुराहरु लेखेको रहेछु । सयौं गीतहरु , अनेकन कविताहरु र अन्य धेरै गन्थनहरु पनि । गन्थनहरु लेख्ने क्रममा बादल पारीकी मायालुलाई मेरो चिठ्ठी शिर्षक दिएर शोक पत्रहरुको संकलन भन्दै मैले लगातार १९० वटा चिठ्ठीहरु लेखेको रहेछु । त्यही पत्र यदी कुनै जिउंदै भएकि प्रेमिकालाई लेखेको भए प्रेम पत्र हुन्थ्यो तर मैले त मरीसकेकी प्रेमिकालाई लेखेको हुनाले शोक पत्र भनिदिएं । त्यस मध्येका कुनै कुनै पत्रहरु त बिसौं पृष्ठ लामो पनि लेखेको रहेछु । उसकै सम्झनामा लेखेका गीतहरु बाट १० वटा गीतहरुको संगालो एक अञ्जुली माया क्यासेट र सिडीमा हालसालै बजारमा पनि निकालेको छु । यसरी उस्ले मलाई जती रुवाएकी छे त्यतीनै बाँच्ने साहस पनि दिएकी छे । जब म उस्लाई बिर्षन नै नसक्ने रहेछु भने अब भन्दिन म उस्लाई बिर्षन्छु भनेर त्यसैले मैले समयलाई पनि अनुरोध गरेको छु -
.....नमेटी देउ ए ! समय उनलाई मेरी मायालु कहानीमा छिन
सुनौलो सपना सजिएको मेरै आँखाको नानीमा छिन .........। र आज पनि फेरी उसैको सम्झनामा श्रदाञ्जली स्वरुप यौटा अर्को गीत थप्दैछु ।
तिमी त बाँच्यौ मेरै गीतमा
म त मरीसकेछु तिम्रै प्रीतमा
सागरमा छौ तिमी अनन्त अथाह
म त सुकें थोपा थोपा शीतमा ।
जित्नेहरु भन्छन यो हार हो मेरो
म भन्छु यहि त प्यार हो मेरो
मैले जित्नै पर्ने यो कुनै खेल हैन
चोखो माया हो यो जाल झेल हैन ।
जब लाग्छ आफु भित्र तिमी बाँचे जस्तै
खुशी फूल्छ पहरामा फूल हाँसे जस्तै
एक्लो यदि छु भने दुनियाँ म भुल्छु
कसैले नटिप्ने म पलाँसमा फुल्छु ।
Posted by दीपक जडित at 3:10 PM No comments: Links to this post
सुन ए ! बटुवा दाई ,
एकैछिन त बिसाएर जाउ
मेरो गीतमा तिम्रो दुख
अनि खुशी मिसाएर जाउ ।
हिंड्दै जाँदा बाटोभरी घाउ धेरै भेटिनेछ
आजका यि खुशीहरु भोली सबै मेटिनेछ
यौटा गीत गाएर जाउ
मेरो गीतले च्यातिएको
तिम्रो मन सिलाएर जाउ ।
लामो बाटो जिन्दगीको हाँसी हाँसी काट्नु पर्छ
केहि खुशी केहि दुख सबै सँग साट्नु पर्छ
थोरै प्रीत लाएर जाउ
मेरो गीतको अधुरो सुर
तिमी पुरा बनाएर जाउ ।
Posted by दीपक जडित at 3:15 PM No comments: Links to this post
सँगै सँगै हिउंदको चिसो शीत खपेर
एकै साथ बसन्तमा ओठ खोल्दै गरेका
एक जोडा कोपिलाहरु
फूल बनेर फक्रीने रहर गर्दै गर्दा
निर्दोश भँवराले चुसिदिएर त्यही रहर
आफुलाई एक्लिनुको पिंडाले
कति नछुवाई मस्त संसारमा
सुगन्ध छरेर फक्रीरहेको छ
निर्दोश भवँराहरु घुम्दै
आउनेछन कुनै दिन तिमी सम्म
चुस्नसक्छन तिम्रा पनि रहरहरु
भवँराहरु निर्दोश हुँदाहुँदै
पापी पनि हुन सक्छन
होसियार तिमी फूल हौ
भवँरा सामु तिमी कहिल्यै
आत्मसमर्पण गरी झुक्नु हुँदैन
सौंन्दर्य फक्रीनु तिम्रो अस्तित्व
निस्पाप भवँराको स्पर्शबाट बच्न
काँढे झ्याङ्गहरु बिच लुक्नु हुदैन
फूलको कोमल मुटुभित्र तिमिसँग
भवँराहरु झेल्न सक्ने साहस हुनै पर्छ ।
२० असार २०५८
Posted by दीपक जडित at 3:08 PM No comments: Links to this post
बेहिसाब नै बितिसक्यो अब जीवनको हिसाब नखोज
जति दुख्नु दुखीसकें म , कती दुख्छौ? भनेर नसोध ।
सुनबुट्टे रहरहरु आँखैमा फुटेर रगतको आँशु झारीरहें
पाईला पाईलामा टेकेर आफैंले फूलाएको सपना मारीरहें
खाली खाली भै रित्तिसकें , कती बाँकी छु ? अब नखोज
जति दुख्नु दुखीसकें म , कती दुख्छौ ? भनेर नसोध ।
आफ्नै नियतीको भुमरीमा परेर बालुवाको अक्षर झैं मेटिईगएं
कण कण भै उडेर धुलो संगै आफ्नै भाग्य संगै रेटिईरहें
टुक्रा टुक्रा भै बांडिईसकें , कहाँ सिङ्गो छु ? भै गो नखोज
Posted by दीपक जडित at 12:37 AM No comments: Links to this post
Posted by दीपक जडित at 1:20 AM No comments: Links to this post
" गीती अल्बम तयार पारेर मात्र कहाँ हुन्छ र ? गीत चलाउनलाई त म्युजिक भिडियो पनि बनाउनु पर्यो नि ? " संगीतकार टिका भण्डारी जी को अनुरोधात्मक दबाव थियो यो । हो पनि आज भोली गीतहरुको भिडियो बनाउने प्रचलन नै छ नत्र भने गीतहरु राम्रो भएपनि ओझेल पर्न सक्छ । एक अन्जुली माया गीती अल्बम तयार हुने बेलातिर कुन गीतको भिडियो बनाउने भन्ने द्विविदा भयो । गणेश गौली जी ले - " दीप दाईको गीतलाई गर्नु पर्छ । दीप दाईको क्रेज युवामाझ पनि छ फेरी दीप श्रेष्ठ भनेको नेपाली गीत संगीत क्षेत्रको ऐतिहासिक धरोहर हो । " भन्नु भयो । गौली जी को कुरामा संगीतकार टिका भण्डारी जी र म सहमत भयौ र काम सुरु भयो । ईमेज च्यानलका दीपक श्रीको निर्देशनमा दीप दाई स्वयं पनि छायाँकित हुनु भएको भिडियो केही अगाडी नै तयार भै सकेको थियो तर मैले भने अझै सम्म हेर्न भ्याएको थिइनं । मैले नेपालबाट सम्पर्कमा भएकाहरु र भिडियो हेरीसकेकाहरु सबैलाई सोधेको थिएं कस्तो भएको छ भनेर सबैले औसतमा राम्रो भएको छ भनेका थिए । आज बल्ल फुर्सद डट कममा उक्त भिडियो लाई राख्न लगाएर हेरें । मलाई भने औधी नै मन पर्यो । आफ्नो शब्दहरुको गीत त्यसमा दीप दाईको स्वर अनि टिका दाईको संगीत , मनपर्ने त भै हाल्यो अझ त्यसमाथी दीपक श्रीले राम्रो प्रस्तुती दिनु भएको छ । भिडियो बनाईदिनुहुने दीपक श्री जी लाई साथै अभिनय गरिदिनुहुने दुबै मोडेलहरुलाई मेरो धन्यवाद । मलाई मनपर्नुको अर्को मुख्य कारण पनि भनुँ है - उक्त भिडियोमा बनाईएको पेण्टिङ्ग मेरी स्व. पत्नि मन्जुको हो । मैले गीती अल्बम नै उसैको नाममा समर्पण गरेको छु र म्युजिक भिडियोमा पनि उक्त कुरा दर्शाईएको रहेछ । भिडियो अपलोड गरेर साईटमा राखिदिएकोमा फुर्सद डट कमलाई मेरो हृदयदेखी नै धन्यवाद । तपाईलाई पनि एक पटक http://fursad.com मा गएर हेरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । प्रतिकृया दिनैपर्छ भन्ने त छैन तर यदि प्रतिकृया लेख्ने मन भयो भने हेरेर मलाई यहिं प्रतिकृया दिन सक्नुहुनेछ नत्र deepakjadit@gmail.com मा लेख्नुहोला ।
मनको सँघार नाघेर गयौ मन रित्तै पारेर ..........................।
Posted by दीपक जडित at 3:22 PM No comments: Links to this post
कस्लाई नजिक सार्यौ भन मलाई टाढा पार्यौ
फुल्दै गर्दा मायाको फूल हाँगाबाट झार्यौ ।
बगरको ढुङ्गालाई देवता सम्झिएछु
चोखो मनले पुजागर्दै मुटु नै दिएछु
त्यै मुटु निचार्यौ भन किन माया मार्यौ
सिमा कोरी पिरतीमा काँढे तारले बार्यौ ।
सँगै थियौ हिजो सम्म मेरै वरपर
बनाउछु भन्दै थियौ मेरो मनमा घर
खै त किन टार्यौ भन किन माया मार्यौ
मेरो चोखो पिरतीलाई भुईंमा लछार्यौ ।
Posted by दीपक जडित at 4:24 PM No comments: Links to this post
विश्वास गरी तिमीलाई
मैले त धोका खाएं
दुखाई नै रहयौ मलाई
रै पनि माया लाएं ।
म त थिएं माया गर्ने
मायाकै निम्ती मर्ने
तिमी त रैछौ खुशी सोर्ने
मायामा मुटु फोर्ने ।
अँध्यारोमै सड्दैछु म
पाईलै पिच्छे लड्दैछु म
आज जिउँदै डढ्दैछु म ।
Posted by दीपक जडित at 11:10 PM No comments: Links to this post